> Resource> Video> Olee otú iji Tinye Photos ka Audio
Chọrọ gbakwunye foto audio mere na ị pụrụ bulite ya YouTube? Ma ọ bụ chọrọ atụgharị gị foto albums n'ime a pụtara ngosi mmịfe? Ị pụrụ ime ya ngwa ngwa na ihe video edezi software dị ka Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Nke a ngwá ọrụ dị ike ga-enyere gị mfe ime a okike e kere eke na gị onwe gị. Soro mfe ise-nzọụkwụ ntụziaka n'okpuru ịmụta otú gbakwunye foto audio na dị nnọọ atọ mfe nzọụkwụ.
1 Mbubata foto gị na ọdịyo faịlụ
Wụnye na-agba ọsọ Video Editor. Họrọ si "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" ruru ọnụego. Wee pịa "Import" button mbubata gị foto na audio faịlụ. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe faịlụ ka usoro ihe omume.
2 Tinye foto ọdịyo na megharia ha
Wee họrọ ndị a kwukwara faịlụ na akpali ha ka ha kwekọrọ ekwekọ tracks na usoro iheomume panel n'okpuru. The photos ga-etinye na video track na audio faịlụ na music track. Mgbe ahụ na-etinye photos na iji ị chọrọ ka ha na-egosi na gị e kere eke. Mgbe ahụ, ịgbanwe usoro iheomume site pụta ìhè na iche faịlụ na-akpụ akpụ na-acha uhie uhie mmịfe.
E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike melite ogo nke foto gị na ọbụna itinye pụrụ iche utịp ha. Iji nyochaa listi nzacha na mmetụta, pịa "Mmetụta" bọtịnụ na ngwá ọrụ mmanya gosipụta menu. Ebe a bụ a zuru ezu ndu banyere otú itinye mmetụta ka video.
Ọ bụrụ na ọdịyo faịlụ kwesịrị edezi, abụọ pịa ya na ịhazie olu na pitch ma ọ bụ tinye ichabo na ma ọ bụ ịjụ oyi si utịp ke mmapụta elu window.
3 Share ma ọ bụ chekwaa anyị onwe anyị e kere eke
Mgbe agbakwunye foto audio, i nwere ike ịzọpụta e kere eke na ụzọ dị iche iche. Ke "Format" taabụ, ị nwere ike chekwaa faịlụ na ihe ọ bụla na-ewu ewu media usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ faịlụ-egwuri na mobile ngwaọrụ, gaa na "Ngwaọrụ" taabụ ma họrọ otu n'ime ndị na ngwaọrụ site na listi.
N'ezie, na-ebipụta ya na-elekọta mmadụ media dị ka Facebook na YouTube nwekwara ihe ọzọ ezi nhọrọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịkọrọ ndị video enyi gị. Iji mee nke a, pịa "Mepụta" button na-aga "YouTube" taabụ. Wet ke ọmụma na programmụ a ga-ebipụta gị e kere eke na-elekọta mmadụ media peeji nke - ọ ga-uploaded n'egbughị oge na n'ụzọ kwesịrị ekwesị. I nwekwara ike ọkụ a DVD na-ewetara gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ enyi na a mara mma packaged disk.
Olee otú Tinye Audio ka MKV
Top 30 Nri Video Sites Watch Olee na-Videos